Ohatra 30 amin'ny doka tsara natao | Famoronana an-tserasera
Misy doka an-tapitrisany, noho izany azonao atao ny mamintina izany mba hisarihana ny sain'ny mpanjifa iray dia tokony ho ao ambadiky ny marika matanjaka be ianao ... na hanao doka tena tsara. Ary amin'ny tranga sasany dia misy ny fepetra roa.
Ireo izay mijanona aorian'ny fitsambikinana dia miavaka satria nametaka ny volavolan'ny toe-javatra tsy misy izy ireo izay mahatonga ny tsy ampoizina, fa mifangaro amin'ny kalitao amin'ny endriny, ny marina dia manome endrika miavaka an'ity fanangonana doka lehibe ity izy ireo.
Betsaka ny marika fanta-daza, fa hadinoy izany. Ny zava-dehibe dia ny fandraisanao ilay foto-kevitra fa azo atao tanteraka ny mamorona doka matotra sy tsy marina amin'ny fotoana iray ... ary manaitra izany.
Nandeha izy rehetra rehefa avy nitsambikina.
1 TV Panasonic 3D: Dino
2 Samsung: Optical Zoom, Alika
3 Delsey valizy: Tarmac
4 Abramet: Hazo
5 Tag Heuer: Vorona
6 Sakafo fanampiny Telepizza: Giant Kong
7 AirWick: Siny
8 Fivarotana kilalao Pastorini: mpanamory fiaramanidina
9 WWF Bluefin Tuna manjono loatra: Panda
10 Fifehezana anglisy: Absurd Crosswalk
12 Fiantohana amin'ny tantsaha: ratra amin'ny asa
14 Fetiben'ny Gastronomy Paladar: Exchange 3
16 Tavoahangy vacuum an'ny tigra: Snow
18 Wikipedia: Ady
19 Pampaverde: burger lehibe fanampiny
20 Fabercastell Truecolours: atody
22 Vonjeo ny Rhino: Zebra
23 Pepsi Diet: esory ny vatanao
24 Duracell: sambo
25 Sary Getty: anaty rano
26 Smart: Fandotoana
27 Seranam-piaramanidina TACA: San Francisco kely
28 ANCMA: Ho tsikaritra
29 Channel +: iPhone, Football
30 Simenitra Shriram: Athena, Gresy
TV Panasonic 3D: Dino
Samsung: Optical Zoom, Alika
Delsey valizy: Tarmac
Tag Heuer: Vorona
Sakafo fanampiny Telepizza: Giant Kong
Fivarotana kilalao Pastorini: mpanamory fiaramanidina
WWF Bluefin Tuna manjono loatra: Panda
Fifehezana anglisy: Absurd Crosswalk
Fiantohana amin'ny tantsaha: ratra amin'ny asa
Fetiben'ny Gastronomy Paladar: Exchange 3
Tavoahangy vacuum an'ny tigra: Snow
Pampaverde: burger lehibe fanampiny
Fabercastell Truecolours: atody
Vonjeo ny Rhino: Zebra
Pepsi Diet: esory ny vatanao
Sary Getty: anaty rano
Seranam-piaramanidina TACA: San Francisco kely
ANCMA: Ho tsikaritra
Channel +: iPhone, Football
Simenitra Shriram: Athena, Gresy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ohatra 30 amin'ny doka tsara endrika
Mireya dia hoy izy:
Tena mahaliana ireo ohatra nasehon'izy ireo! Misaotra betsaka, fanampiana be tokoa izy ireo amin'ny famelomana ny saina! fiarahabana
Mamaly an'i Mireya
Mampihomehy fa ny doka "Colgate Max White One: Guy" dia eo ambanin'ny lohatenin'ny DESIGNED INDRINDRA ... mety misy lesoka goavambe izany. Ny vavan'ny vehivavy, amin'ny vatan'ny lehilahy